အစ္စလမ်ဘာသာနဲ့ လိင်တူချစ်သူများရဲ့ အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ “Jihad For Love” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းအညွှန်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » အစ္စလမ်ဘာသာနဲ့ လိင်တူချစ်သူများရဲ့ အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ “Jihad For Love” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းအညွှန်း
အစ္စလမ်ဘာသာနဲ့ လိင်တူချစ်သူများရဲ့ အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ “Jihad For Love” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းအညွှန်း
Posted by Phyo on Sep 6, 2010 in Education, Movies/TV | 15 comments
ဇာတ်လမ်းနာမည် – Jihad for Love
ဒါရိုက်တာ – Parvez Sharma
ထုတ်လုပ်သူ – Sandi Simcha DuBowski, Parvez Sharma
ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ – (U.S.)
ကြာမြင့်ချိန် – 81 min
ဘာသာစကား – အင်္ဂလိပ်၊ အာရပ်၊ ပါရှန်း၊ အူဒူ၊ ဟိန္ဒူ၊ ပြင်သစ်၊ တူရကီ (အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုး)
ဒီဇာတ်ကားလေးကိုတော့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ချစ်ညီ ညီမလေးတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တကူးတက မရမကရအောင် ရှာဖွေပြီးတော့ တင်ပြပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကြောင်း မပြောခင် ဒီဇာတ်လမ်းရေးဖို့ ဖြစ်လာရတဲ့ နောက်ခံ အကြောင်းလေးကို နည်းနည်း ပြောပါရစေ။ တခါက ကျနော့်ရဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် လိင်တူချစ်သူ (သူက အမျိုးသားကနေ အမျိုးသမီးဘဝကို ပြောင်းလဲ ခံယူထားသူပါ) သူငယ်ချင်းတယောက် ရင်ဖွင့်တာကို နားထောင် ခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူက သူ့ရဲ့ လိင်တူချစ်သူ ဘဝကိုလည်း မစွန့်လွှတ်နိုင်ဘူး။ ပြီးတော့ သူတကယ် ယုံကြည်ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်ရတဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာကိုလည်း မစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးတဲ့။ ဒါပေမယ့် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် မွတ်ဆလင် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း ကတော့ သူ့ကို လက်မခံဘဲ ဝိုင်းကျဉ်တာကို ခံရတဲ့အတွက် သူ့ဘဝမှာ အမြဲတမ်း အကျဉ်းအကျပ်ထဲ ရောက်နေသလို ခံစားရတယ်လို့ သူက ရင်ဖွင့်ရှာပါတယ်။
အစ္စလာမ်ဘာသာမှာ လိင်တူချင်း ချစ်တယ်ဆိုရင် အကုန်လုံး နင့်ကို ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်သတ်လို့ရတယ်၊ နင်သေရင် ငရဲရောက်မှာ သေချာတယ် စသဖြင့် သူ့အပေါ် ဝိုင်းဝန်းပြစ်တင်ရှုံ့ချ ကဲ့ရဲ့ တာတွေကိုလည်း အလူးအလိမ့် ခံစားခဲ့ရသလို ဗလီထဲကိုတောင် သူ့ကို ဝင်ခွင့်မပြုခဲ့ဘူးလို့ ရင်ဖွင့်ရှာပါတယ်။ ပြီးတော့ သူက မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ ကျနော်ကိုမေးပါတယ် “အစ်ကိုရေ မွတ်ဆလင် အခြောက်ဖြစ်နေတာ ကျမတယောက်ထဲလား။ တခြား မွတ်ဆလင် အခြောက်တွေရော မရှိတော့ဘူးလား။ ပြီးတော့ ကိုရန်ကျမ်းမှာ အခြောက်တွေကို လက်မခံရဘူးလို့၊ အခြောက်တွေအားလုံး ငရဲအိုးထဲ ရောက်လိမ့်မယ်လို့ အာလာ ကိုယ်တိုင် အမှန်တကယ် ဟောပြော ထားခဲ့လားတဲ့”။ အဲဒီတုန်းက ကျနော့်မှာ ဘာမှ အဖြေမပေး နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီမေးခွန်းကို ငါတရက်တော့ ရအောင် ရှာပေးပါမယ်လို့ပဲ ကတိပေးခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီတုန်းက ကျနော့်မှာ အဲဒီမေးခွန်းကို မဖြေချင်တဲ့အချက် နှစ်ချက်ရှိပါတယ်။ ပထမ တစ်အချက်က ကျနော်က အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မဟုတ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် အဲဒီအကြောင်းကို ရှင်းပြဖို့ ကျနော့်မှာ credit မရှိဘူးလို့ ခံယူတယ်။ နောက်တချက်ကတော့ အဲဒီ ကိုရန်ကျမ်းကို ဝေဖန်သုံးသပ်မှု ပြုတော့မယ်ဆိုရင် ခက်ခဲနက်နဲတဲ့ သီအိုလိုဂျီ အတွေးအခေါ်တွေ၊ ဟိုနှစ်ပေါင်း ထောင်သောင်းမက ကျမ်းစာကို ဘယ်လိုပြုပြင် ရေးသားလာခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းတွေ အကြောင်းကို ကိုယ်ကိုတိုင် ဂဂနန မလေ့လာပဲ ရမ်းသမ်းပြီး ပြစ်စလက်ခတ် ပြောပြလိုက်မယ်ဆိုရင် သာမန်လူတယောက် အနေနဲ့ အချိန်တိုတို အတွင်းမှာ နားလည်နိုင်ဖို့ဆိုတာ လွယ်တဲ့ကိစ္စ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို စဉ်းစားမိတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ ခုတော့ ကျနော် အဖြေပေးနိုင်ပြီ။ ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာ ခုနက ကျနော့်သူငယ်ချင်း မေးထားတဲ့ မေးခွန်းတွေအတွက် အဖြေတွေ အများကြီး တွေ့ရမှာပါ။ ကဲ ဒါဆိုရင် ကျနော် ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းချုပ်ကို နည်းနည်းပြောပြမယ်နော်။
ပထမဦးဆုံး ပြောထားချင်တာက Jihad for Love ဟာ စိတ်ကူးယဉ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနေ့ မွတ်စလင် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွေမှာ အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့ ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကို ထင်ဟပ်ရိုက်ကူးပြထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် မှတ်တမ်းတင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတခု ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မွတ်ဆလင် လိင်တူချင်းချစ်တဲ့ သူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ လူသိရှင်ကြား ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ဖော်ပြသလိုက်တဲ့ ပထမဦးဆုံးသော သမိုင်းဝင် ရုပ်ရှင်မှတ်တမ်း တခုလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Jihad ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဟာ အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေ အနက်ဖွင့်လျက်ရှိတဲ့ “သန့်ရှင်းသော စစ်ပွဲအတွက် အသေခံခြင်း”ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်တကယ်တော Jihad ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က မြင့်မြတ်ကောင်းမွန်တဲ့ မွတ်ဆလင် ဘာသာဝင်တယောက် ဖြစ်လာဖို့ မိမိကိုယ်ရဲ့ အတ္တတွေ၊ လိုအင်ဆန္ဒတွေကို ကျော်လွားနိုင်ဖို့ “ရုန်းကန်ကြိုးစားခြင်း” ဒါမှမဟုတ် “ရုန်းထွက်ခြင်း”လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်လို့ ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီမှတ်တမ်းတင် ဇာတ်လမ်းကို ပထမဦးဆုံး တောင်အာဖရိကနိုင်ငံက အီမန် လို့ခေါ်တဲ့ ဘာသာတရား အလွန်ကိုင်းရှိုင်းတဲ့ လိင်တူချစ်သူ အမျိုးသားတယောက်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်နဲ့ စတင်ထားပါတယ်။ အီမန်ရဲ့ မိဘနှစ်ပါးစလုံးက ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
အီမန်ကို ဗလီကျောင်းဝင်း ထဲမှာပဲ မွေးဖွားခဲ့သလို အီမန်ရဲ့ ငယ်စဉ် ကလေးဘဝက အစ္စလာမ် ကျမ်းပိုဒ်တွေကို ရွတ်ဖတ်ရင်းနဲ့ပဲ ကြီးပြင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အီမန် အသက်ငါးနှစ် အရွယ်မှာ သူ့ရဲ့ လိင်စိတ်ခံယူမှုဟာ အခြားယောက်ျားလေးတွေထက် တမူ ထူးခြားနေတာကို သတိထား မိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမ်းစာကျောင်းတက်လိုက်ရင် ဘာသာရေးဆရာ လုပ်လိုက်ရင် သူ့ရဲ့ လိင်စိတ်ကလည်း တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်မိတဲ့အတွက် နောက်ပိုင်းမှာတော့ ပါကင်စတန်ကိုသွားပြီး ဘာသာရေးကျောင်းတခုမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာကို လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ လိင်စိတ်ခံယူမှုကို ပိုပြီး မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ဖြစ်သွားဖို့ဆိုပြီး အိမ်ထောင်ပါ ပြုလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီနောက်တော့ သူအရမ်းချစ်ရတဲ့ ယောက်ျားလေး သူငယ်ချင်းတယောက်ကို တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ တနေ့တော့ အဲဒီကောင်လေးနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ရတဲ့ တနေ့မှာ ဣနြေ္ဒတောင် မဆည်နိုင်အောင် ဝမ်းနည်းငိုကြွေး ခဲ့ရပါတော့တယ်။ အဲဒါကိုမြင်တဲ့ သူ့ဇနီးက နင့်က အဲဒီသူငယ်ချင်း ကောင်လေးကို တကယ်ချစ်နေတာလားလို့ မေးတဲ့အခါမှာတော့ အီမန်က အဖြစ်မှန်ကို ဖွင့်ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လိင်တူချစ်သူအဖြစ် ခံယူလိုက်ပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် အီမန်မှာ ဇနီးသည်နဲ့ရထားတဲ့ သမီးလေး သုံးယောက် ရှိပါတယ်။ အဲဒီ သမီးသုံးယောက်နဲ့ အီမန်တယောက် ဘယ်လိုစခန်းသွားမလဲ ဆိုတာကိုတော့ စာဖတ်သူအနေနဲ့ ဖန်သားပြင်မှာ ပြန်လည်ရှုစားနိုင်ပါတယ်။
ဒီနံပါတ် ၂ ဇာတ်ကောင်ကတော့ အီရန်နိုင်ငံက လိင်တူချင်းချစ်သူ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးရဲ့ တိတ်တိတ်ပုန်း ချစ်ကြိုက်နေရတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးပါ။ အဲဒီ အမျိုးသမီး နှစ်ယောက်ကလည်း ကိုရန်ကျမ်းမှာ လိင်တူချင်းချစ်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လိုတွေ မိန့်မှာထားတယ်ဆိုတာကို အတူတကွ လိုက်လံရှာဖွေ ဆည်းပူးပြီး သူမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ လိင်တူချစ်သူဘဝနဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ သဟဇာတဖြစ်အောင် အတူတကွ ပေါင်းသင်းနေထိုင် မလဲဆိုတာ ကြိုးပမ်းနေတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို မှတ်တမ်းတင် ရိုက်ကူးထားတာပါ။
ဒီဇာတ်ကောင်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ကိုးဆယ်ကျော် ခုနှစ်လောက်က အီဂျစ်နိုင်ငံ ကိုင်ရိုမြို့တော်က အပမ်းဖြေ သင်္ဘောပေါ်မှာ ပါတီလုပ်နေကြတဲ့ အမျိုးသားတစုကို လိင်တူချစ်သူတွေပါဆိုပြီး အာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ လိင်တူချစ်သူ အမျိုးသားတယောက်ရဲ့ အီဂျစ်တရားရုံးမှာ ဘယ်လို အရှက်တွေရခဲ့တယ်၊ ဘယ်လို နာကျဉ်းဖွယ် အဖြစ်အပျက်တွေ့နဲ့ တွေ့ကြုံခဲ့ရပြီး နောက်ဆုံး ပြင်သစ်နိုင်ငံကို ဒုက္ခသည်အဖြစ် ခိုလှုံခွင့်တောင်းခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ပြန်ပြောပြထားတာပါ။
ဒီအဖြစ်အပျက်ကတော့ အီရန်နိုင်ငံကနေ ထွက်ပြေးလာခဲ့ရတဲ့ လိင်တူချစ်သူ အမျိုသား လေးယောက် တူရကီနိုင်ငံမှာ လာရောက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ရုံးမှာ ဒုက္ခသည်အဖြစ် လာရောက်ခိုလှုံခွင့် တောင်းဆိုနေတဲ့ သူတွေရဲ့ အကြောင်းပါ။ အဲဒီမှာ လေးယောက်စလုံးက အီရန်နိုင်ငံမှာ လိင်တူချင်းချစ်တဲ့သူ ဖြစ်ရတဲ့အတွက် အာဏာပိုင်တွေနဲ့ မွတ်ဆလင် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ခြိမ်းခြောက် နှောက်ယှက်မှုတွေကို ဘယ်လို ခံစားခဲ့ရကြောင်းကို ပြန်လည်ရင်ဖွင့် ပြောပြခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို ရိုက်ကူးတင်ပြ ထားပါတယ်။ အဲဒီအပြင် တူရကီနိုင်ငံက လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့ ဘဝနဲ့ အီရန်နိုင်ငံက လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့ ဘဝကိုပါ နှိုင်းယှဉ်ရိုက်ပြ ထားတာတွေကိုပါ တွေ့ရမှာပါ။
ဆိုတော့ ဇာတ်အိမ်တွေက ဒီလောက်တင် မဟုတ်ပါဘူး၊ တခြား မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေက လိင်တူချစ်သူတွေ အကြောင်းလည်း ပါ ပါသေးတယ်။ ဒီမှာ အကုန်ရေးပြနေရင် စာမျက်နှာဆန့်မှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကို ဒီလောက်နဲ့ပဲ ပြောပြပါရစေ။
ဒီဇာတ်လမ်းကို နိုင်ငံပေါင် ၁၂နိုင်ငံမှာ ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဘာသာစကား ၉ မျိုးအထိ ပါဝင်နေတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား၊ အီရန်၊ အီရတ်၊ ပါကင်စတန်၊ အီဂျစ်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ တူရကီ၊ ပြင်သစ်၊ အိန္ဒိယ၊ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ၊ အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန်နဲ့ ကနေဒါ စတဲ့ နိုင်ငံတွေက မွတ်စလင် လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့ ဘဝအတွေ့အကြုံ အခက်အခဲတွေ အကြောင်းကို ပြည်ပြည့်စုံစုံ ခက်ခက်ခဲခဲ လိုက်လံစုံစမ်း ရိုက်ကူးတင်ပြထားပါတယ်။ ဒီမှတ်တမ်းတင် ရုပ်ရှင်မှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက လိင်တူချစ်သူတိုင်းဟာ ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှာ ကျင်လည်နေကြရပေမယ့်လို့ အစ္စလာမ်ဘာသာကို စွဲစွဲမြဲမြဲ ယုံကြည်ကိုးကွယ် ကြသူတွေဖြစ်နေ သလို မိမိတို့ရဲ့ လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ ယုံကြည်ခြင်းကို ဘယ်လို သဟဇာတဖြစ်အောင် သင့်မြတ်ကောင်းမွန်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင် နေကြလည်းဆိုတာကို ဒီမှတ်တမ်းတင် ရုပ်ရှင်မှာ ကောင်းကောင်းမြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာက ဒီဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးတင်ပြတဲ့ ဒါရိုက်တာဟာ မွတ်ဆလင် အသိုင်းအဝိုင်းထဲက တချို့ အစွန်းရောက်ဝါဒီ အတော်များများရဲ့ သတ်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကို ခဏခဏ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော အခက်အခဲတွေ အမျိုးမျိုးကြားကနေ ကြိုးစားရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဒီမှတ်တမ်းတင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ခုချိန်မှာ နိုင်ငံပေါင်း ၄ဝ ကျော်မှာ အောင်မြင်စွာ ပြသနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သလို နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ဆုတွေကိုလည်း တပွေ့တပိုက် ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဆူးကို သတ်မဲ့ဓါး says:
ကိုဖြိုးရေ ဇာတ်လမ်းကတော့ တော်တော်တော့ ကြည့်ကောင်းမယ်နော် ရိုက်ကူထားတဲ့နေရာတွေလည်းအများကြီးပဲ ပြီးတော့ ဘာသာရေးနဲ့ ကိုယ့်စိတ်ဆန္ဒကို လွန်ဆွဲနေရတဲ့ သူတွေအကြောင်းဆိုတော့ တော်တော်လေး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမယ်နော်……
“ကိုဖြိုးရေ ဇာတ်လမ်းကတော့ တော်တော်တော့ ကြည့်ကောင်းမယ်နော် “………
ဒါက မကြည့် ရသေးတဲ့သဘော…….ပေါ့
ဒါက ကြည့်ပြီးပြီ ဆိုတဲ့သဘော………..
စဉ်းစားကြည့်တာ ကိုယ်ရေးတာ ကိုပြန် မန်းနေတာလားပေါ့နော် .. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မန်းလို့ ရတယ် ဆိုပေမဲ့ .. ပေးထားတဲ့ နံမည်က ” ဆူးကို သတ်မဲ့ဓါး ” ဆိုတော့ ဒီရွာထဲမှာလဲ စာရေးနေတဲ့ ဆူး ဆိုတဲ့မိန်ခလေးကလဲ ရှိနေပြန်တယ်လေ.. ကန့်ကွက်တာတွေ ဘာတွေ မလုပ်ခင် များပြာသော အနည်နာမ တွေထဲက အသစ်တခု လောက် ပြန်လည် ရွှေးချယ်နာမည် ပေးစေချင်ပါတယ်. ကာယကံရှင်နဲ့တော့ ဆွေမျိုး မတော်ပါဘူး .. ဒီဇာတ်လမ်းရာဇာဝင်သိနေတဲ့ သူတယောက်အနေနဲ့ ပြေလည်ရာပြေလည်ကြောင်း တိုက်တွန်းကြည့်တာပါ.. ကျေးဇူး တင်ပါတယ်…..
ဟုတ်တယ်ဗျ (ဆူးကိုသတ်မဲ.ဓါး) ဆိုတဲ.နံမည်လေးကိုတော. ပြောင်းသင်.တယ်ထင်တယ်
တော်ကြာ တစ်မျိုးတွေ တွေးပြီး ရွာထဲမှာ မတည်.မကြည်တွေ ဖြစ်ကုန်ရင် မကောင်းဘူး
ရွာသားတစ်ယောက် အနေနဲ. ပြေလည်ရာပြေလည်ကြောင်း ဆွေးနွေးကြည်.တာပါ
အော် ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေက အမြင်လွဲနေကြတာပါဗျာ…။ကျွန်တော့်ရဲ့ ဓါးက နှင်းဆီကို ချစ်လို့ ကိုင်ကြည့်မယ့် ကိုင်တွယ်မဲ့ ပန်ဆင်မဲ့ ညီမလေးတွေအတွက် ဆူးတွေကို မဆူးမိစေဖို့ သုတ်သင်ပေးမဲ့ အနေနဲ့ ပေးထားတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဆူးဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ တကယ်ကိုတောင်းပန်ပါတယ် တလွဲတွေထင်မိကုန်ရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါ ။ ပြန်ပြောင်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ ။ နောက် ကို တညင်သားကိုပြောရဦးမယ်ဗျ သူများကို ပြောချင်စိတ်တွေများပြီး ဇာတ်ညွှန်းကို သေချာမဖတ်ပဲ ကျွန်တော်မန့်ထားတာကို ပြောချင်စိတ်က များနေတယ်ဆိုတာ နဲနဲလေး သတိဝင်ပါဦး ဗျ ။
“ရိုက်ကူထားတဲ့နေရာတွေလည်းအများကြီးပဲ”ဒါက ကြည့်ပြီးပြီ ဆိုတဲ့သဘော……….
ကျွန်တော်မကြည့်ရသေးပါဘူး ဒါပေမဲ့ ရိုက်ထားတဲ့နေရာတွေကို ဇာတ်ညွှန်းထဲမှာရေးထားပေးပါတယ် ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က ရိုက်ကူးထားတဲ့နေရာတွေများကြီးပဲနော်လို့ ရေးမိသွားတာပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဒီဇါတ်ကားကို ကြည့်ပြီး အထက်ပါ ပို့ စ်တင်သူ ဆီ လာအားပေးကြပါလို့ ဆိုချင်တာများလား မသိ
အမှန်ကတော့ ဒဲ့ပြောချင်တာ ကျွန်တော် မလိမ်ချင်ပါဘူး .. အဲဒီ သဘော လို့ ရေးထားကတဲက ကျွန်တော်ထင်တာကိုရေးတာပါ….ပြောချင်စိတ်လဲမများပါဘူး.. ပြေလည်ရာပြေလည်ကြောင်းဖြစ်စေချင်တဲ့ စေတနာပါ..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ .. အခုလို ပြောင်းလိုက်တော့လဲ ကျွန်တော်ကပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်…………
ဖျြိး ကိုတောင်အားနာမိတယ်ဗျာ ပို့စ်နဲ့မဆိုင်တာတွေ မန်းမိလို့ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျား ၀မ်းသာစရာ သတင်းတော့ ပြောပြချင်တယ် ..
ပါကစ္စတန်မှာတော့ လိင်တူ ချစ်သူတွေအတွက် တရားဥပဒေ ပြဌာန်းလိုက်ပြီဆိုပဲ……:(
ဘယ်သူလဲကွ၊ ရွာထဲ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ဝင်ပြီး ရွာတော်ရှင်မ ဆူးကို စော်ကားမော်ကား ပြောရဲတာ။ မင်းတို့ ပေါ်တင်ပြောမယ်ကွာ၊ ငါကလည်း ဖြိုးကိုထိုးမဲ့.. အဲအဲ.. ကြမ်းပိုး
တခါက အာဖကန်အကြောင်းရိုက်ပြတဲ့ အိုဆာမာ လားသိပ်ကောင်းပါတယ်
တောတော်ကောင်းမှာပါ အခုအယူသီးမှိုင်းတွေမိပြီး အချင်းချင်းတောင်မတည့်ကြ
၀တ်ရုံတွေခြုံကြ ဦးရာဇတ်ကိုလွမ်းမိပါတယ်၊ ဆရာချယ်(နိုင်ငံဂုဏ်ရည်ပထမဆင့်)ကို
သတိရမိပါတယ်။ (စကားချပ်)အစ္စလာမ်မှာလည်း သမ္မထကျင့်စဉ်တွေရှိတယ်လို
ဒီလောက်ပါပဲ ကျွန်တော်လေ့လာရန် အရမ်းလိုအပ်ပါသေးတယ်ခင်ဗျား။
“””အဲဒီ ကိုရန်ကျမ်းကို ဝေဖန်သုံးသပ်မှု ပြုတော့မယ်ဆိုရင် ခက်ခဲနက်နဲတဲ့ သီအိုလိုဂျီ အတွေးအခေါ်တွေ၊ ဟိုနှစ်ပေါင်း ထောင်သောင်းမက ကျမ်းစာကို ဘယ်လိုပြုပြင် ရေးသားလာခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းတွေ အကြောင်းကို ကိုယ်ကိုတိုင် ဂဂနန မလေ့လာပဲ ရမ်းသမ်းပြီး ပြစ်စလက်ခတ် ပြောပြလိုက်မယ်ဆိုရင် “””
ကိုဖြိုးဒီနေရာမှာ အကြီးအကျယ်မှားသွားပါလိမ့်မယ်။ကျနော်သိထားတဲ့၊ကမ္ဘာ့ အစ္စလာမ့်သာသနာဝင်တွေရဲ့ ကုရအာန်ဟာ
ယနေ့ချိန်ထိ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမရှိသော ကောင်းကင်ကျကျမ်း တစ်စောင်အဖြစ်တစ်ခုတည်းဘဲရှိတော့တာပါ။လေ့လာပါဦး။
အဲလိုတော့လည်း မဟုတ်သေးဘူးဗျ။ သူတို့ ဘာသာမှာလည်း ကိုယ်လိုရာဆွဲတွေး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်တဲ့ ကျမ်းတွေအများကြီးပဲ။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ အစ္စလာမ်ပညာရှင်တဦး ဒီဖက်ခေတ်မှာ သုံးသပ်တဲ့ မြန်မာလို စာအုပ်တဦး ဖတ်ဖူးတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ မဟုတ်တော့ မေ့သွားပြီ။ ပြန်တွေ့ရင် လင့်ခ်ပေးလိုက်မယ်။ သဘောကတော့ ပါဠိက အဌကထာကျမ်းတွေလိုပါပဲ။ မူလကျမ်းကို မိမိဒေသထုံးစံ၊ အမြင်တွေ ရောယှက်ဖွင့်ကြတာ။ ဆိုးတာက အဲဒီဘာသာမှာ ကွဲလွဲခွင့်ကို လက်မခံဘူး။ ပိုတင်းကြပ်တဲ့ ဖွင့်ဆိုမှုမျိုးဆိုရင်တော့ လက်ခံပေးတယ်။ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး၊ ဘာသာပြောင်းသူများ အခွင့်အရေး စတဲ့ အရေးကြီးနဲ့ အချက်အတော်များများကို ဒေသအလိုက် လိုသလို အလျော့အတင်းလုပ်ထားတယ်။ ဆွန်နီနဲ့ ရှီယာအုပ်စုခြင်း မတည့်တာဘဲကြည့်ဗျာ။ အစ္စလာမ်ဘာသာ အိန္ဒိယဖက်ကို ရောက်သွားတော့ မူရင်းသွန်သင်ချက်တွေနဲ့ လောကီအစီအရင်တွေ ရောကုန်တယ်ထင်တယ်။ အထူးသဖြင့် အဲဒီဖက်က မွတ်စလင်တွေမှာ ဟိန္ဒူတွေလိုပဲ အင်းအိုင်လက်ဖွဲ့ ဆေးဝါးအစီအရင်တွေ ရှိတယ်။ ဟိန္ဒူနတ်ဘုရား အစီအရင်များမှာ သူတို့ဘုရား ဘုန်းတော်ဘွဲ့ အစားထိုးလိုက်တာပေါ့ဗျာ။ ဒါမျိုး ကျနော်တို့ မြန်မာတွေလည်း ကျွမ်းပါတယ်။ အဲဒီမှာတင် အပျော့နဲ့ အမာဆိုပြီး အခြားဘာသာများမှာလို ဖြစ်တာပါပဲ။ သို့သော် သူတို့က ပွင့်လင်းမှု မရှိလို့သာ လူသိပ်မသိတာ။။။။။။။။
ကောင်းကင်ကျ ကျမ်း = ရှင်းလင်းပေးစေချင်
ကောင်းကင်က ဝုန်းကနဲကျလာခြင်း ဖြစ်ပါသလား
လိင်တူလည်း မုန်းတယ် .. ဟိုဘာသာလည်း မုန်းတယ် … အဲ့ဒီတော့ .. အဲ့ဒီရုပ်ရှင်လည်း မကြည့်ဘူး
အင်း သနားစရာ အိတုံပါလား။ချစ်သောမျက်စိလေးနဲ့ သာရှုတတ်ခဲ့ရင်တော့လေ
ကျွန်တော့သဘောပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ သဘောမကျရင် ကွန်မန့် မပေးတော့တာ ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ် ..
နို့မိုဆို ကွန်မန့်တွေနဲ့ အသက်ဆက်ခိုင်းနေသလို ဖြစ်နေတယ် ..။
ရန်ဖြစ်ရတာလဲ လျှော့နဲသွားမယ် …။ နို့မို့ဆို သံတွဲထက် အဖြစ်ဆိုးတော့မယ် ..။
လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာနဲ့ ကိုင်ကိုင်အပေါက်ခံနေရတာလဲ သက်သာသွားမယ်ထင်တယ် ..။
ဒါကြောင့် မထောက်ခံရင် ကွန်မန့် မရေးသားတာ အငြိမ်းချမ်းဆုံး နည်းဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်တယ် ..။